Badhanka si loo hubiyo cusbooneysiinta Android ma shaqeynayo | Androidsis
Eder Ferreño | | Amniga, Tababarada
ka Telefoonada Android waxay leeyihiin hab fudud oo lagu ogaan karo haddii wax cusboonaysiin ah la heli karo iyadoo lagu mahadinayo jeegga batoonka cusbooneysiinta. Sidan oo kale, markaan gujino badhanka waxaan arki karnaa haddii ay jiraan wax la heli karo iyo in kale. Sidaa darteed, waxaan kala soo baxnaa oo ku rakibnaa aaladdayada. In kastoo, ay u muuqato in xaqiiqadu xoogaa ka duwan tahay, sida ay taasi u muuqato waxaa jira cillad dhanka nidaamka ah.
Elliott Hughes waa injineer Google ah oo ka faalooday in badhanka cusbooneysiinta uu fashilmay hadana ma shaqeyso. Isla xaaladdii dhacday dhowr bilood ka hor. Sidoo kale, waxay umuuqataa inaan wali sugi doono inta xalku imaanayo.
En Sebtember waxaa jiray cilad ku jirtay badhanka cusbooneysiinta, taas oo nasiib wanaag la xaliyay. Laakiin kaliya seddex bilood ka dib isla xaaladaas ayaa soo noqnoqota. Intaa waxaa dheer, waxay umuuqataa in kiiskan aan sugeyno ilaa sanadka 2018 inta xalku imaanayo.
Sida muuqata, sida uu ka faallooday injineerka Google, cusbooneysiinta ku saabsan nidaamka nidaamka cusbooneysiinta Google isbeddelo ayaa lagu sameeyay Google Play. Isbeddeladani waxay keeneen ikhtiyaarka mas'uulka ka ah soo dejinta noocyada OTA in aysan shaqeyn. Marka waxaa jiri kara isticmaaleyaasha aan helin wax cusbooneysiin ah inta lagu jiro waqtigan. Hadday saas tahay, meesha dhibaatada ka jirtaa waa tan.
Xilligan lama oga inta cilladani shaqeyneysay. Sidoo kale lama oga inta ay qaadaneyso in xal la bixiyo. Waxaa la sheegay inay imaaneyso sanadka 2018, inkasta oo aan waxbadan shaaca laga qaadin. Marka waa a arrin la ogaan karo oo loogu talagalay dadka isticmaala android.
Kani waa cayayaan aad u xun, in kastoo warka wanaagsan uu yahay soosaarayaasha badankood waxay adeegsadaan nidaamkooda cusbooneysiinta OTA. Taasi waxay ka dhigan tahay inaysan ku tiirsaneyn midka Google adeegsado. Marka waxay u egtahay in fashilka uusan adiga saameyn ku yeelan oo waxaad heli kartaa cusbooneysiinta sida caadiga ah. Wixii loogu talagalay milkiilayaasha leh Pixel iyo Nexus Ma jirto sabab loo walwalo sidoo kale, maadaama ciladdii lagu hagaajiyay qalabkan.
Laakiin hadda dhammaan taleefannada gacanta ee kale ee ku tiirsan nidaamka cusbooneysiinta Google ayay dhibaatadan saameysay. Ma ka mid tahay kuwa ay saamaysay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » Hubi badhanka cusbooneysiinta ayaa ku jabay qaar ka mid ah Android